नाडा अटो मेलामा २ देखि ८० हजारसम्मका हेल्मेट, हरेकमा १० प्रतिशत छुट
विनोद आचार्य काठमाडौँ, भदौ १७
सवारीसाधनको कुम्भ मेला भनिने नाडा अटो मेला यतिबेला राजधानीको भृकुटिमण्डपमा जारी छ। विभिन्न दुई तथा चार पांग्रे सवारी साधन, बैंक, लुब्रिकेन्टदेखि पार्टसपूर्जा सम्बन्धी कम्पनीका स्टलहरु राखिएका छन्।
त्यस्तै मेलामा दुई पाग्रें सवारीचालकको टाउकोको सुरक्षा कवज ‘हेलमेट’ को समेत स्टल राखिएका छन्। मेलामा भारतीय ब्राण्ड ‘आरन’ र फ्रान्सको ‘सार्क’ ले स्टल राखेका छन्।
मेलामा दुबै ब्राण्डका हेलमेटको खरिदमा १० प्रतिशतको छुट दिइएको छ।
आरन हेलमेटका राहुल कुमारले ब्राण्डका हेलमेटमा ३ वर्षको वारेन्टी दिइएको बताए। सस्तो मूल्यमा ब्राण्डेड हेलमेट भएकाले मेलामा ‘आरन’ को स्टलमा आर्कषणमा रहेको कुमारले दाबी गरे।
आरन हेलमेट तथा एसेसरिजलाई नेपालमा विशाल अटोले वितरण गर्दै आएको छ। यस ब्राण्डका हेलमेट २ हजारको ‘जेट फ्लाएरदेखि ४ हजार ५ सयसम्मको मोटो एक्स टु डेकर’ सम्म रहेका छन्।
त्यस्तै अन्तराष्ट्रिय बजारमा डिजाइन र सेफ्टीका लागि ख्याती कमाएको सार्क ब्राण्डले पनि मेलामा स्टल राखेको छ।
ज्योति गुप्र अन्तर्गतको बाईक माइन्डेड प्रा. लि. ले नेपाली बजारमा सार्क हेल्मेट वितरण गर्दै आएको छ।
सार्कका हेलमेटहरुको मूल्य भने ‘आरन’ को भन्दा निकै गुणाले महँगो छ। सार्क हेलमेटको सुरुवाती मूल्य नै १५ हजार ९ सय छ भने ७८ हजारसम्मका हेलमेट उपलब्ध छन् जसमा ‘माइक्रो ब्ल्याकं माइक्रो’ देखि ‘रेस आर प्रो’ सम्म रहेका छन्।
रेस आर प्रो हेलमेट मोटो जिपी, मोटो टु लगायतका खेलहरुका ‘रेसर’ का लागि केन्द्रित गरेर बनाइएको हो। त्यसैले यो हेलमेटको निमार्णमा कार्बन फाइबर सेलको प्रयोग गरिएको छ जसले यसलाई सुरक्षित बनाएको छ।
त्यस्तै यस हेलमेटमा भेन्टिलेटरको समेत सुविधा रहेको छ। त्यस्तै यो हेलमेट अमेरीकाको ‘डर्ट’ तथा युरोपको ‘इसीइ’ दबै गुणस्तरीय चिन्ह समेत प्राप्त गरेको छ।
सार्क हेलमेटका इमरान सुभानिया ‘सेफ्टी’ र डिजाइन नै सार्कको सबल पक्ष रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार सार्कका हेलमेटमा ५ वर्षको वारेन्टी दिइएको छ।
दुबै कम्पनीका स्टलमा ‘फुल फेस’, ‘मोडुलर’, ‘अपेन फेस’, ‘हाल्फ हेलमेट’ तथा अफ ‘रोर्ड हेलमेट’ हरु रहेका छन्।
हेलमेटको प्रयोगमा ध्यान दिनुहोस यी कुराः
टाउकोको साइज अनुरुपको हेलमेट लगाउने
आफूलाई फिट हुने हेलमेटको प्रयोगले टाउकोको सुरक्षामा मात्र नभएर व्यक्तिको मानसिकतामा पनि सकात्मक भूमिका खेलेको हुन्छ।
बजारमा प्रयोगकर्ताको टाउकोको साइज अनुसारका विभिन्न ५ प्रकारका हेलमेट उपलब्ध छन्। जसमा साना तथा ठूला टाउका भएका मोटरसाइकल चालकसम्म सबैलाई फिट हुन्छ।
बजारमा ५३ तथा ५४ सेन्टिमिटरको ‘एक्सट्रा स्मल’, ५५ तथा ५६ सेन्टिमिटरको ‘स्मल’, ५७ तथा ५८ सेन्टिमिटरको ‘मिडियम’ ५९ तथा ६० सेन्टिमिटरको ‘लार्ज’ र ६१ तथा ६२ सेन्टिमिटरको ‘एक्सट्रा लार्ज’ साइजका हेलमेट उपलब्ध छन्।
यी बाहेक सामान्य भन्दा निकै सानो तथा ठूला टाउका भएकालाई ५१ तथा ५२ सेन्टिमिटर को ‘एक्सट्रा एक्सट्रा स्मल’ र ६३ तथा ६४ सेन्टिमिटरको ‘एक्सट्रा एक्सट्रा लार्ज’ साइजका पाइने हुँदा आफ्नो टाउको सुहाउँदो हेलमेट छान्नुपर्छ।
मौसम तथा तापक्रम अनुसारको हेलमेट प्रयोग गर्ने
यदी तपाई बस्नुभएको स्थानको मौसम चिसो छ भने फुल हेलमेटको प्रयोग गर्दा त्यसले अनुहार तथा टाउको दुबैलाई चिसोबाट बचाउँछ।
तर गर्मीको मौसममा फूल हेलमेट भन्दा हाल्फ वा ओपन हेलमेटको प्रयोग ज्यादा मौसम अनुकुल मानिन्छ। यद्यपी सुरक्षाको हिसाबले हाल्फ भन्दा फुल हेलमेटको प्रयोग गर्नुपर्नेमा विज्ञहरु जोड दिन्छन्।
हेलमेटको सर्टिफिकेसन हेर्ने
नेपालमा हेलमेटको गुणस्तरमा कुनै मापदण्ड नभए पनि भारत, युरोप तथा अमेरिकामा भने सर्टिफिकेसनको तह निर्धारण गरिएको हुन्छ।
नेपालमा हेलमेट उत्पादन नभए पनि विदेशबाट केही कच्चा पदार्थ ल्याई नेपालमै फिटिङ गर्ने गरिएको छ। सर्टिफिकेसनको मापदण्ड पुरा नगरिएको हुँदा हेल्मेट छनौट पनि चुनौतिपूर्ण बन्ने गरेको छ। विदेशबाट आयातित भनिएका नक्कली हेलमेट पनि बजारमा पाइने हुँदा कुन देशको हेलमेट कुन गुणस्तरको हुन्छ भन्नेमा चनाखो रहनुपर्छ।
हेलमेट सर्टिफिकेसनमा भारतको ‘आइसए सर्टिफाइड’, अमेरीकाको डर्ट सर्टिफाइड तथा युरोपको इसीइ सर्टिफाइड हुने गर्दछन्।
सवारी अनुसारको हेलमेटको प्रयोग
आफ्नो सवारी भन्दा पनि फेसन अनुसारको हेलमेट प्रयोग गर्ने विकृति बढेर गएको छ। जसका कारण लगाउँदा भद्दा देखिनुका साथै सुरक्षाको जोखिम पनि उच्च रहने गर्दछ। मोटरसाइकल, स्कुटर वा साइकलले आफ्नो साधनलाई सुहाउँदो तथा सुरक्षित र सवारीको सिसी क्षमता अनुरुपको हेलमेटको प्रयोग गर्नुपर्छ।
समय समयमा हेलमेट धुने
विज्ञहरुका अनुसार आफूले प्रयोग गर्दै आएको हेलमेट लामो समयसम्म नधुँदा कपाल झर्ने, छालामा एलर्जी आउने, टाउको चिलाउने जस्ता समस्या देखा पर्छन्। शारिरिक मात्र नभइ मानसिक रुपमा पनि स्वस्थ रहन आफूले लगाउने कपडाझैँ हेलमेट पनि समय समयमा राम्रोसँग धुन सकिन्छ। यदी हेलमेट निकै पुरानो नै छ भने नयाँ प्रयोग गर्नुहोस्। त्यस्तै हेलमेट किन्दा धुन मिल्ने खालका किन्ने गर्नुपर्छ।
६– ६ महिनामा हेलमेट फेर्ने
हेलमेट व्यापारी, विज्ञ तथा बाइक राइडरको भनाइअनुसार हेलमेटमा प्रयोग भएको फाइबर, भाइजर लगायतका मेट्रियल समय समयमा सफा गर्ने तथा परिवर्तन गर्ने गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हरेक ६­६ महिना पछि आफूले प्रयोग गरेको हेलमेट फेर्ने गर्नुपर्छ।
सस्तो र झिल्केमा हैन ब्राण्डमा जोड दिने
पछिल्लो समयमा गुणस्तरमा भन्दा हेलमेटको प्रिन्ट, डिजाइन, लुक्स हेरेर किन्ने प्रचलन बढेर गएको चौधरी बताउँछन्। मोटरसाइकल दुर्घटनामा कमसल तथा सस्तो मूल्यकोे प्रयोगका कारण हेलमेट फुटेकै कारण गहिरा चोट लाग्ने गरेका उदाहरण प्रशष्त छन्।
त्यस्तै विभिन्न समयमा सस्तोमा हैन ब्राण्डेड हेलमेट प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै ‘महँगो बाइक सस्तो हेलमेट किन?’ भन्ने जस्ता जनचेतना मूलक कार्यक्रमहरु आयोजना हुने गरेका छन्।
त्यसैले हेलमेट किन्दा सस्तो भन्दा पनि ब्राण्डेड हेलमेट गुणस्तरीय हुने हुँदा त्यस तर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरु औलाउँछन्।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ १७, २०७४, ०७:१९:४१